Momba anay - Zhejiang Leadrive Electric Motor Co., Ltd.
Ny tsy fahampian'ny finoana amin'ny orinasa dia toy ny tsy fahampian'ny finoana ny zanak'olombelona. Sarotra ny hahatratra tanjona lehibe ary hahombiazanao maharitra. Na indostrian'ny orinasa io paikady na fandaminana indray ny fikambanana, saika ny fanovana rehetra dia miankina amin'ny mahazatra, finoana mazava sy rafi-kolontsaina. Raha ny marina, ny fananganana na fanovana ny zavatra inoan'ireo orinasa dia atolotry ny mpandraharaha miorina amin'ny filan'ny fanovana stratejika sy ny serivisy
ho fanovana stratejika ny.
Eto ianao dia afaka mahita ny zava-bitan'ny fitomboana ary mianatra momba ny fivoaranay farany. Izahay koa tena vonona ny hizara aminareo hankafy ny traikefa nahafinaritra amin'ny fitomboana miaraka amin'ireo mpiara-miombon'antoka eran'izao tontolo izao. Mazava ho azy, afaka mahita ny andraikitray ianao sy andraikitra. Amin'ny fikatsahana orinasa sy mpiasa hiara-hitombo amin'ny fotoana iray, manaraka hatrany ny lalan'ny fampandrosoana maharitra izahay ary mandray andraikitra ara-tsosialy andraikitra, Fanasoavana ny besinimaro, fiverenana ara-tsosialy.
Eto dia azonao jerena ihany koa ny fahitanay. Manenjika tsy misy tohiny isika "roa ara-bola, telo vaovao, dimy, fambolena "Tanjona stratejika, tsy hiezaka fotsiny hahatratra ny fanovana tsy tapaka ary fanavaozana ny harinkarenan'i Shina ao anatin'ny fari-piainana vaovao, fa mba hizarana fotoana hafa koa miaraka amin'ireo mpiara-miasa aminy manerantany, Mivoatra miaraka.
Ny soatoavina dia avy amin'ny famoronana! Manasa anao izahay hiaraka hamorona ny ho avy!
Mifantoha amin'ny fampandrosoana ny paompy azo antoka & tontolo iainana ary mamorona lanja ho an'ny mpandray anjara rehetra.
Asandrato ny sarin'ny indostrian'ny paompy sy rafitra sinoa, amin'ny maha-orinasa mitarika fampandrosoana maharitra amin'ity orinasa ity.
Mihazakazaha orinasa miaraka amin'ny VIRTUE, Mitadiava fahombiazana amin'ny PERFECTION, Mandresy fandresena amin'ny EFISIENY, Mandehana amin'ny ASA mahitsy.
Sarina liona misy toetran'ny hafanam-po, fahalalahan-tanana, fanantenana ary faniriana noforonina ho mascot mifototra amin'ny zodiakin'ny Leadrive.
Zhejiang Leadrive Electric Motor Co., Ltd. Any amin'ny faritr'i Taizhou-an mahery tanàna ho an'ny toekarena tsy miankina amin'ny faritanin'i Zhejiang, ary miankina amin'ny toekarena lehibe faribolan'i Delta Yangtze River, Zhejiang Leadrive Electric Motor Co., Ltd. (eto antsoina hoe "motera tripow") dia misy tontolo iainana ambonimbony kokoa. To airport A Huangyan 2 kilometatra fotsiny ary ny seranan-tsambon'i Haimen dia 10 kilometatra miala ny orinasa mankafy ny rano an-tanety- rivotra-fanondranana miaraka amin'ny fitantanana manavao azy ekipa, rafitra fitantanana maoderina, mpiasa ambony kalitao, famokarana tanteraka fotodrafitrasa, fitaovana fitsapana feno, hery teknika matanjaka, vokatra azo antoka kalitao, dingana famoahana mahafinaritra, rafitra kalitao tonga lafatra, R&D efa mandroso ekipa fahaiza-manao sy varotra matihanina, Leadrive MOTOR dia lasa kintana mitombo ao amin'ny indostrian'ny motera sinoa. Io tambajotram-barotra io dia niparitaka tamina faritany 20 teo ho eo sy ny tanàna manerana ny tany. Ny fiheverana ny marika dia nahagaga ny rehetra dia nanjary ny safidin'ireo cusomer tiany ary nahazo laza tsara eo amin'ireo mpampiasa.
Môtô Leadrive dia miavaka amin'ny famokarana, fikarohana ary ny varotra isan-karazany ny motera. Ny vokariny dia ahitana andiana motera tsy misy ifandraisany 3-ph toy ny Y, YE2, YE3, YD, YEJ, YVP ary motera manokana hafa azo. Fandraisana an-tanana ny sara-pirenena ary miaraka amin'ny tahan'ny herinaratra sy ny refy miakatra ao amin'ny jiro IEC, ny vokatra dia manana ny tombontsoa ao anatin'izany ny fahombiazan'ny avo, ny tady fanombohana avo, ny fisondrotan'ny feo ambany, ary azo itokisana be. Ny vokatra dia notombanana mba hanaraka ny CONFORMITY CE ho an'ny EU firenena ary voamarina fa CCC sy CQC. Ny orinasa dia nahatratra ny IS09001 iraisam-pirenena fanajana ny rafitra kalitao. Ny motera Leadrive dia manolo-tena hanaporofoana vahaolana voavaha mpampiasa amin'ny fampiharana indostrialy sy elektrika amin'ny alàlan'ny fanamboarana manokana - manokana marika manokana Motors.
Ny fanavaozana sy ny tsy fivadihana no fototray. Ny mampifanaraka sy manovaova no tombony ho antsika. Izahay dia mikendry ny hisolo tena ny Made in China amin'ny sehatry ny motera herinaratra manerantany. Mifikitra amin'ny hevitra "hitsaboana ny mpanjifa amin'ny fahamendrehana ary handresy ny tsena amin'ny kalitao" ary hihaona amin'ireo fangatahana miovaovaovaon'ny mpanjifa na an-trano na any an-trano, izahay dia natokana ho an'ny marika mpamorona "Leadrive motor" ary hampahafantatra izany an'i Shina ary koa amin'izao tontolo izao. Miaraka amin'ny fahamendrehantsika sy ny faharanitanay dia manantena ny ho avy mamirapiratra miaraka izahay miaraka aminao.